I-Cottage eNtofontofo ezolileyo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJordan And Morgan
Ixhotyiswe ngendawo yokuhlala, igumbi elinye lokulala elinobukhulu obupheleleyo, igumbi lokuhlambela elibanzi kunye nekhitshi enempahla, le ndlu ethokomileyo inayo yonke into oyifunayo. Ukuqhuba imizuzu elishumi elinesibini ukuya eBryon Energy Plant kunye nemizuzu engama-20 yokuqhuba ukuya kwisibhedlele i-KSB eDixon. Uhambo olufutshane ukuya edolophini okanye emlanjeni. Zonwabele iindawo zokutyela, imivalo, iivenkile zokutya, ivenkile kunye nokunye. Ukuloba okukhulu, ukuhamba ngesikhephe, iindlela zokuhamba intaba kunye neminye imisebenzi yangaphandle! Ukusaba ngokugqibeleleyo kubuphithiphithi, ukuphithizela kunye nokuphithizela kobomi.
Indlu yethu epholileyo imalunga ne-600 yeenyawo zesikwere, ixhotyiswe ngendawo yokuhlala, igumbi elinye lokulala elinebhedi egcweleyo, igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo kunye ne-1920 ebuyiselwe i-claw foot tub kunye nekhitshi egcwele yonke into oyifunayo. I-driveway yabucala yokupaka.
I-Oregon yidolophu encinci, ezolileyo esecaleni koMlambo iRock kwaye ifakwe phakathi kweepaki ezimbini. Iinduli zinemithi, iindawo eziluhlaza kunye nazo zonke izinto eziluncedo onokuthi uzifune. Ikhaya lethu lihamba umgama wokuya kwivenkile yokutya/ivenkile yotywala, iindawo zokutyela kunye neevenkile. Kukho iipaki ezininzi zokuphononongwa, iimayile zeendlela zebhayisekile kwaye ikhaya lethu lizibhloko nje ukusuka emlanjeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Jordan And Morgan
Sinika iindwendwe zethu ubumfihlo kwaye ziyafumaneka 24/7 ngefowuni.